Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UKhenketho lwaseJamaica lubambe iiNtetho zoTyalo-mali oluBalulekileyo kwiCruise
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Umphathiswa Wezokhenketho, Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett (ngasekhohlo) uhambisa ikopi yeJamaican esekwe kwi-Global Tourism Resilience kunye neCrisis Management Centre yemagazini kwi-Vice-President we-DP World, u-Mohammed Al Maullem. Inkcazo-ntetho yenziwa kutsha nje ekupheleni kweentlanganiso zenqanaba eliphezulu lotyalo-mali lokuhamba ngenqanawa kunye ne-DP World, eyona nkampani iphambili yezizwe ngezizwe ese-United Arab Emirates.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, kutshanje ugqibe uthotho lweentlanganiso ezibalulekileyo zokutyala uhambo ngenqanawa kunye ne-DP World, eyona nkampani iphambili yezizwe ngezizwe ese-United Arab Emirates (UAE).
Ngexesha leentsuku ezintathu zilandelelana zeentlanganiso, bekukho iingxoxo ezinzulu malunga notyalo-mali kwiPort Royal Cruise Port kunye nokubanakho kokubuyela ekhaya.
Kwitafile ekwakuxoxwa ngayo yayikukuphuhliswa kwesibonelelo sokuhambisa izinto, iVernamfield yezothutho ngeendlela ezininzi kunye neAerotropolis, kunye nolunye utyalomali lwezixhobo.
Ezi ngxoxo kufuneka ziqhubeke kungekudala.
“Ndonwabe kakhulu ukwazisa ukuba iintlanganiso zethu nenye yezona zibuko zikhulu zaselwandle kunye neenkampani zamalwandle, iDP World, zibe nempumelelo enkulu. Ngexesha leentsuku ezintathu zilandelelana zeentlanganiso, besibambe iingxoxo ezinzulu malunga notyalo-mali kwiPort Royal Cruise Port kunye nokubanakho ukubuyela ekhaya. Sixoxe nangokuphuhliswa kweziko lezothutho, iVernamfield yezothutho ngeendlela ezininzi kunye neAerotropolis, kunye nolunye utyalomali lwezixhobo, ”utshilo uBartlett.
Usihlalo Wehlabathi we-DP, uSultan Ahmed Bin Sulayem, ngomphathiswa wakhe, usekela-Mongameli oLawulayo we-DP World, u-Mohammed Al Maullem, uvakalise umdla eJamaica udlulise imibuliso kwi-Nkulumbuso, Oyena Mhloniphekileyo. UAndrew Holness.
UBartlett kunye nabaphathi be-DP World kufuneka baqhubeke nezi ngxoxo kungekudala kwiPort Authority yaseJamaica kunye noMphathiswa woHlumo lwezoQoqosho kunye nokuDalwa kwemiSebenzi.
I-DP yeHlabathi igxile kulungiselelo lwempahla, iinkonzo zaselwandle, imisebenzi yesiphelo samazibuko kunye nemimandla yorhwebo yasimahla. Yenziwa kwi-2005 emva kokudityaniswa kweGunya leZibuko laseDubai kunye neDubai Ports International. I-DP yeHlabathi ilawula izikhongozeli ezizizigidi ezingama-70 eziziswa ngeenqanawa ezingama-70,000 ngonyaka, ezilingana ne-10% yezithuthi zekhonteyina zehlabathi ezibalwa zizikhululo zazo zaselwandle ezingama-82 ezikhoyo kumazwe angaphezu kwama-40. Kude kube ngowama-2016, i-DP yeHlabathi yayiyeyona ndawo isebenzela amazibuko kwihlabathi liphela, kwaye ukusukela ngoko ifumene ezinye iinkampani phezulu nasezantsi kwikhonkco lamaxabiso.
Ngelixa ukwi-UAE, UMphathiswa uBartlett kunye neqela lakhe uzakudibana nabameli beGunya lezoKhenketho kweli ukuxoxa ngentsebenziswano kutyalomali lokhenketho kulo mmandla; Amalinge okhenketho kuMbindi Mpuma; kunye nokungena kwamasango eMntla Afrika nase-Asia kunye nokuququzelelwa komoya. Kuya kubakho iintlanganiso kunye nabaphathi be-DNATA Tours, oyena mqhubi mkhulu wabakhenkethi kwi-UAE; amalungu eDaaspora yaseJamaican kwi-UAE; kunye neenqwelomoya ezinkulu ezintathu eMbindi Mpuma- e-Emirates, eItiad naseQatar.
Ukusuka e-UAE, uMphathiswa u-Bartlett uya e-Riyadh, e-Saudi Arabia, apho aya kuthetha khona kwi-5th Anniversary of the Investment Initiative (FII). I-FII yalo nyaka iza kubandakanya iincoko ezinzulu malunga namathuba amatsha otyalo-mali kwihlabathi liphela, uhlalutyo lweendlela zeshishini, kunye nothungelwano olungenakuthelekiswa nanto phakathi kwee-CEO, iinkokheli zehlabathi kunye neengcali. Uya kudityaniswa neSenator, Hon. Aubyn Hill kwisikhundla sakhe njengoMphathiswa ngaphandle kwePotifoliyo kwi-Ofisi yoPhuhliso loQoqosho kunye nokuDalwa kwemiSebenzi (i-MEGJC), noxanduva lwaManzi, uMhlaba, ukuThengwa kweNkqubo yoShishino (i-BPOs), iGunya eliKhethekileyo loLawulo loMmandla weJamaica kunye neeprojekthi ezizodwa.